के बाबुराम भट्टराई देवता हुन् ? - Himalayan Kangaroo
के बाबुराम भट्टराई देवता हुन् ?
Posted by Himalayan Kangaroo | ३० जेष्ठ २०७३, आईतवार ११:०३ |
– रामबहादुर जिसी
आज जेठ ३० गते बिहानै सञ्चारमाध्यम हेरेपछि नयाँ शक्तिका बारेमा केही लेख्न मन लाग्यो । राजधानीबाट निस्कने सबै पत्रिकाको प्रमुख पृष्ठमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिको विज्ञापन तथा टेलिभिजनमा भट्टराई आफै मोडलिङ गरेका विज्ञापनले मेरो ध्यान केन्द्रीत गरेकोले आफ्नो विचार लेख्न थालेको छु । करिव ४० वर्ष कम्युनिष्ट विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै अनवरत यात्रा गरेका डा.बाबुराम भट्टराई यतिबेला विगतको विचारधारालाई नै छोडेर नयाँ शक्ति अभियानमा छन् । उनले आज जेठ ३० गते काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा एक लाख भन्दा बढी कार्यकर्ताका बीचमा पार्टीको आधिकारीक घोषणा गर्ने सार्वजनिक गरेका छन् ।
सत्ता बन्दुकको नालबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा रहेका र २०५२ सालमा ४० बुदे माग तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएर सशस्त्र युद्धमा गएका थिए । १७ हजार नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको उनी समेतको सहभागितामा सञ्चालित उनकै भाषाको जनयुद्धको जगमा रहेको पार्टी उनले छोडेका छन् । २०२९ सालमा झापा विद्रोह गरेको तत्कालिन झापाली समुह अर्थात नेकपा मालेले मान्छे मार्ने काम गलत थियो भनेर फरक राजनीति धारमा उभिएर आज एमाले बनेको अवस्था छ । बाबुराम सहितको सहभागितामा भएको सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति बनाउने क्रममा पनि उनले त्यस विषयमा खुलस्त पार्न सकेका छैनन् । सशस्त्र विद्रोहकै जगमा र कम्युनिष्ट नेताकै रुपमा प्रधानमन्त्री समेत भएका बाबुरामले पुराना शक्तिहरुले अब मुलुकको आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई थेग्न नसक्ने दावी गर्दै आएका छन् । संवैधानिक सम्वाद समितिको संयोजक समेत भएर संविधान जारी गरेका उनी संविधान घोषणा गर्दासाथ पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति अभियानमा लागेका उनी नयाँ शक्तिको संयोजकका रुपमा रहेका छन् ।
नयाँ शक्ति अभियानले आर्थिक विकासको एजेण्डालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । स्वभाविक रुपमा यसले लिएको एजेण्डा मुलुकको हितमा छन् । तर उनको समुहमा आवद्ध व्यक्तिहरुको विगत हेर्दा यसलाई संयोजन गर्न निक्कै गाह्रो विषय हो जस्तो लाग्छ । किनकी त्यहाँ राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा पनि भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको बाहुल्यता छ । हिजो राजाको शासन हुदाँ त्यसैलाई राम्रो मान्ने, पञ्चायत, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी जसको सत्ता भए पनि त्यसैलाई राम्रो मानेर स्वार्थ सिद्ध गर्ने अवसरवादीहरुको समेत संलग्नता, सशस्त्र विद्रोहमा इमान्दारपूर्वक लागेका तथा सशस्त्र विद्रोहकै नाम भजाएर स्वार्थ सिद्ध गरेकाहरुको समेत संलग्नताका कारण यसलाई दिर्घकालसम्म अगाडि बढाउन निकै चुनौती छ । पुराना राजनीतिक दलहरुले अबको आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई थेग्न सक्दैनन् भनेर नयाँ शक्तिमा लागेका बाबुराम भट्टराईको व्यवहार हेर्दा कतै उनी आफुलाई अदभूत शक्ति भएको व्यक्तिका रुपमा स्थापना गर्न लागेका त छैनन ? यस्तो भान हुन थालेको छ । आफुलाई देवत्वकरण गर्ने प्रयास स्वरुप उनले नयाँ शक्तिको परिकल्पना गरेका त होइनन ? भन्ने आशंका नयाँ शक्तिका नाममा भैरहेको प्रचार प्रसार र उनको व्यवहारले देखाउन थालेको छ ।
हिजो कुनै दिन थियो, माओवादीको जनयुद्ध र प्रचण्ड प्रयायवाची थिए । प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्ने प्रयास त्यतिबेला भएकै हुन् । प्रचण्डले आफुलाई चर्चामा ल्याउन प्रचण्डपथ नामक सिद्धान्त ल्याएका थिए र देशभर त्यहि सिद्धान्तका आधारमा कार्यकर्तालाई परिचालन गरेका थिए । अन्तत प्रचण्डपथ एक्काइशौ शताब्दीको जनवादमा परिणत भयो । पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति हावी हुने खालका गतिविधि हिजो प्रचण्डका थिए । पार्टी भन्दा व्यक्ति हावी हुने अर्थात व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने प्रयास स्वयं बाबुराम रहेको तत्कालिन नेकपा माओवादीले प्रचण्डलाई गर्न खोजेको थियो । कतै प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्न उक्साउने व्यक्ति यिनै बाबुराम त थिएनन् भन्ने कुरा यतिबेला उनको कार्यशैली र व्यवहारले देखाउन थालेको छ । नयाँ शक्ति अभियानले गरेको प्रचार, बाबुरामलाई देवत्वकरण गर्ने दिशामा अग्रसर छ, यसले नयाँ शक्तिलाई त फाइदा गर्दैन नै, स्वयं बाबुरामलाई पनि हित गर्दैन ।
पार्टी, संगठन भनेको सामुहिक नेतृत्व हो । एउटा निश्चित गन्तव्य सहितको सिद्धान्त, लक्ष्य र योजनाका साथ समुहमा विचार विश्लेषण गरेर कार्यनीति निर्माण गरी अगाडी बढ्ने प्रणाली नै राजनीति हो तर नयाँ शक्तिको प्रचार शैली हेर्दा डाक्टर साहेवलाई देवत्वकरण गर्ने खालको देखिएको छ । मिडियामा जसरी बाबुराम विज्ञापनको मोडेलका रुपमा छाउन खोजीरहेका छन् यसले उनको उचाईलाई बढाउने होइन घटाउने काम गरिरहेको छ । पार्टी घोषणाका नाममा उनले जसरी खर्च गरिरहेका छन् । नेपाली सचेत जनताले उनको व्यवहारलाई नियाली रहेका छन् । यसले अन्तत उनी र उनको नयाँ शक्तिलाई हित गर्दैन ।
मुलुकले राजनीतिक कोर्ष पुरा गरेको छ, अब आर्थिक समृद्धिको अभियानमा सबै लाग्नुपर्छ । त्यसको नेतृत्व नयाँ शक्तिले गर्दा कुनै आपत्ती छैन । नयाँ शक्तिले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको खाका ल्यायो र त्यसले जनता र राष्ट्रको हित भयो भने नेपाली जनताले पक्कै साथ दिन्छन् । नेपाली जनता कसैका भोट बैंक होइनन् । राणा शासन बचाउने र पचाउने देखि पञ्चायत, राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्थामा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी देखि खिलराज रेग्मी सम्मलाई पचाउने नेपाली जनताले भोली नयाँ शक्तिलाई साथ नदिने भन्ने हुदैन । नेपाली जनता कति सचेत छन् भन्ने कुरा शक्तिका आडमा सत्ता चलाउछु भन्ने दुस्साहस गर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठेगान लगाएकोबाट बाबुरामले नबुझ्ने कुरै भएन । नयाँ शक्ति अभियान जसरी व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने तरिकाले अगाडि बढीरहेको छ ।
बाबुराम भट्टराई भनेको देवता नै हुन्, भन्ने तरिकाले प्रचार प्रचार गरिएको छ । यसले नयाँ शक्ति गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । धेरै पार्टीहरुले व्यक्तिलाई देवत्व करण गर्न खोजेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् र ति देवत्वकरण गर्न खोजिएका पार्टी र व्यक्तिहरु आज लाइट बालेर खोज्नु पर्ने अवस्थामा छन् । नयाँ शक्ति अभियान पनि बाबुरामलाई देवत्वकरण गर्ने अभियानमा नलागोस् । मुलुकको आर्थिक विकासको सारथी बन्न सफल रहोस् । शुभकामना ।
Previousनेविसंघको ११ औं महाधिवेशन साउन २३ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने
Nextनयाँ शक्ति बलियो चुनौति बन्नसक्छ : प्रधानमन्त्री ओली
१३ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०१:५३
नेपालीले दुख पाउँनुमा एमाले जिम्मेवार !
३२ श्रावण २०७३, मंगलवार ०६:०२
मस्तिष्क सुरक्षाका लागि के खाने
११ भाद्र २०७१, बुधबार ०८:१६